Vaovao - Ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-javatra sy ny vidin'ny fandefasana entana amin'ny fanondranana
Ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-javatra sy ny vidin'ny entana amin'ny fanondranana
1. Niakatra be ny vidin’ny akora
Hatramin'ny nanamafy ny politikan'ny fampihenana ny herinaratra tamin'ny volana septambra, dia nihena be ny famokarana ferronika ao an-toerana. Ny volana oktobra dia mbola lehibe ny elanelana misy eo amin’ny famatsiana herinaratra sy ny tinady any amin’ny faritra samihafa. Ny orinasa nikela dia nanitsy ny drafitry ny famokarana araka ny tondro enta-mavesatra. Antenaina fa ny vokatra amin'ny volana oktobra dia hampiseho fironana midina.
Araka ny fanehoan-kevitry ny orinasa dia nitombo be ny vidin'ny famokarana eo noho eo ny ozinina ferronikely noho ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana fanampiny tato ho ato; ary ny fiantraikan'ny politikan'ny fampihenana ny herin'aratra dia nitarika ny fampihenana ny enta-mamokatra ao amin'ny orinasa, ary ny salanisan'ny vidiny dia nitombo be raha oharina amin'ny famokarana mitohy. Raha jerena ny vidin’ny tsena amin’izao fotoana izao dia efa an-dalam-pahavoazana ny famokarana avy hatrany amin’ireo orinasa, ary efa very vola ny orinasa tsirairay. Niakatra hatrany hatrany ny vidin’ny vy tamin’ny farany. Eo ambanin'ny politikan'ny fanaraha-maso indroa ny fanjifana angovo, mitohy ny toe-javatra malemy amin'ny famatsiana sy ny tinady, ary miatrika olana sarotra indray ny orinasa ferronikely. Eo ambanin'ny mekanika mifehy ny tsena dia hisy fihodinana vaovao amin'ny fiovan'ny vidiny ihany koa.
2. Miakatra hatrany ny taham-pitaterana an-dranomasina
Ankoatra ny fiantraikan'ny politika momba ny tontolo iainana sy ny vidin'ny akora, misy fiantraikany lehibe kokoa ihany koa ny fiovan'ny vidin'ny fitaterana.
Araka ny Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) navoakan'ny Shanghai Aviation Exchange, taorian'ny 20 herinandro nisesy nisondrotra, dia nianjera voalohany ny tondro entana entana SCFI farany. Nambaran’ity mpaninjara entana ity fa na dia efa nihena kely aza ny taham-pitaterana entana, dia mbola manefa ny saram-piantombohan’ny sarany ankapobeny (GRI) amin’ny volana oktobra ireo kaompania mpitatitra entana. Noho izany, ny entana tena izy dia mbola mila ampiana amin'ny sandan'ny GRI ho ny tena tahan'ny entana.
Nanelingelina ny famerenan’ny kaontenera ny valanaretina. Noho ny fanaraha-maso tsara ny toe-javatra misy ny areti-mifindra any Shina, baiko marobe no nafindra tany Shina ho an'ny famokarana, ka nahatonga ny fonosana fanondranana, izay nanamafy ny tsy fahampian'ny toerana sy ny fitoeran-javatra tsy misy na inona na inona. Vokany, nitombo hatrany ny entana an-dranomasina.
Fotoana fandefasana: Oct-16-2021